Pinterest na WordPress
Pinterest abụrụla ihe kachasị ọhụrụ na ntanetị mmekọrịta. Pinterest, na ndị ọzọ, dị ka Google+ na Facebook, na-eto eto ọrụ ngwa ngwa karịa ndị ọrụ nwere ike ịmụta otu esi eji ọrụ ahụ, mana nnukwu ọrụ onye ọrụ pụtara na ileghara ọrụ ahụ anya bụ nzuzu. Ọ bụ ohere iji bulie akara gị. Anyị na-eji Pinterest na WP Engine, yabụ aga m eburu akara anyị na post dị ka ihe atụ bara uru.
Na mbu, ika eji ihe eji eme ihe nwere ike ghara inwe isi… Ebe ọ bụ na anyị anaghị eme uwe agbamakwụkwọ, na anyị anaghị ere nri, gịnị kpatara anyị ji eji Pinterest? Anyị na-eji ya n'ihi na Pinterest nwere ikike dị ịtụnanya iji bulie SEO, ma bulie akara ngosi mmalite ntanetị, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-achọ iji ya maka ụlọ njikọ.
Pinterest bụ echiche dị mfe, na-egbu egbu.
Ntụtụ bụ ihe oyiyi ị gbakwunye na Pinterest, jikọtara ya na ebe ọzọ na weebụ, ma ọ bụ bulite na kọmputa gị. Ntụtụ nwere backlink na ọdịnaya mbụ. Can nwere ike ịkọwapụta onyonyo ma mmadụ niile nwere ike ikwu okwu na ibe. Enwere ike igbunye ibe obula nwere onyonyo.
Mbadamba ndị mebere okwuchi bọọdụ ebe ndị ọrụ na ụdị nwere ike idowe atụdo. Enwere ike ịhazi mbadamba site na otu, dị ka "Bartọ Anụ Mmịkpọ," na "Killer Twitter Avatars," ma ọ bụ "Infographics."
Na-edegharị bụ kpọmkwem ihe ọ na-ada ka. Enwere ike "kọghachite" ntụtụ ọ bụla na bọọdụ ọhụrụ ka onye ọzọ soro. Nke a bụ ebe Pinterest na-arịa ọrịa. Ọ bụrụ na ndị ọrụ amalite ịmegharị oge niile, mgbe ahụ ọdịnaya gị, na akara gị, gbasaa na netwọkụ ahụ, na -emepụta backlink ọhụrụ oge ọ bụla.
Pinterest dị egwu, n'ihi na AKWYKWỌ ọ bụla nke ọdịnaya nwere ihe oyiyi, enwere ike ịkekọrịta na pinboard, nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe ịnakọta ọtụtụ ọdịnaya n'otu ebe. Ọ dị mkpa iche n'echiche karịa achịcha agbamakwụkwọ. You nwere ike ịkekọrịta blog posts, WordPress gburugburu, ogbako ogbako gị, gụnyere foto nke okwu ị nyere.
Oge ọ bụla onye ọrụ tụgharịrị ọdịnaya gị, ị ga-enweta backlink ọzọ.
Yabụ kedu ka isi rụọ ọrụ maka mkpọchi? Na-ekwu okwu banyere ọdịnaya, ngwaahịa, ọrụ, na ntụrụndụ ndị ọrụ gị nwere mmasị na ya, mgbe ahụ ị ga-amalite ịtụ ya. Ọ nwere ike iwepụta oge iji nweta njikọ aka zuru oke nke onye ọrụ, mana ọ bụrụ na ịnweta ọdịnaya dị mma, ọ bụ naanị oge.
Ghọta ndị ahịa gị
Na WP Engine, ọtụtụ ndị ahịa ugbu a bụ ndị mmepe WordPress. Ha di oke oru, ha na achoputa ihe di iche-iche nke puru ime ka ha buru ndi ndumodu ma meputakwa ndi mmepe na ndi okacha amara. Ga-achọ profaịlụ onye ahịa gị, wee pịa ọdịnaya dabara na ọdịmma ha.
Dịka ọmụmaatụ ebe a bụ ụfọdụ ogwe osisi anyị na-amalite, yana ihe kpatara nke ọ bụla n’ime ha.
Ahụhụ n'ọhịa: Foto ndị ọrụ nyefere n'okpuru na-eyi uwe t-uwe. Nwere ike ịjụ maka foto ndị a oge obula gị ụlọ ọrụ na-enye pụọ ewere swag.
Newbies WordPress: Noob nke taa bụ echi ninja tomorrow anyị kwenyere n'ịzụlite nka na nka… Ọ gaghị ekwe omume onye ga - ebido ụlọ ọrụ nke ha n'ọdịnihu.
Gburugburu Gburugburu: Isiokwu ndị a bụ ụdị nke onwe ha, mana m na-agbasi mbọ ike ịgbakwunye isiokwu ndị na-edozi nsogbu ndị na-atọ ụtọ n'ụzọ ndị mara mma, ma ọ bụ bụrụ ndị e mere n'ụzọ ịtụnanya.
Koodu Snippets FTW: Ezigbo ihe atụ nke etu esi etinye ọdịnaya dị na Pinterest. Ọ bụrụhaala na enwere foto na ibe ahụ, enwere m ike izipu snippets koodu ma ọ bụ mmepe saịtị.
Nkwado Tech bụ Ahịa: Omenala ụlọ ọrụ anyị na-ebute nkwado karịa ahịa, anyị na-egosipụta nke a n'ahịa anyị. Branddị gị ga-enwe isi uru nke na-eme ka ọ pụọ iche, ị nwere ike ịkọwa ya ebe a.
Anyị Curated Plugins: Ndepụta ndepụta nke plugins nke anyị nwalere ma kwado ndị mmepe WordPress jiri.
Nzaghachi ndị ahịa: Branddị ọ bụla kwesịrị igosi ezigbo nzaghachi ndị ahịa n'ihu ọha. Pinterest bụ nnukwu ebe iji gosipụta ike na adịghị ike ya.
Ọ bụrụ n ’ị tụnye ọdịnaya dị mkpa, Pinterest nwere ike ịpụta ọtụtụ backlinks maka ọdịnaya gị. Mgbe ị na-eche maka ezigbo ndị ahịa gị, cheedị ihe bụ nnukwu nchegbu ha, ihe ha na-ebute ụzọ ma na-eleghara anya, depụta ihe ndị ahụ ma bido ịtụ ha. Jiri mgbasa ozi mgbasa ozi gị dị ugbu a iji nweta oke egwu na Pinterest, ma echefukwala ịtinye ọdịnaya ndị ọrụ gị.
Tags: PinterestAWordPressWP Engine
Enwere m pinterest iji bulie saịtị m na nsonaazụ ya bụ ihe ịtụnanya na saịtị m siri na # 234 gaa # 9 n'ime izu ole na ole.
Ihe aghụghọ bụ na anyị ga-enwerịrị ebe nrụọrụ weebụ anyị na-atụgharị ma na-edegharị ọtụtụ mmadụ na nke a bụ akụkụ kachasị ike. Imirikiti ndị ọrụ pinterest agaghị eme repin mgbe ha anaghị adị ka ihe anyị fụrụ.
M na-eme ihe dị mfe iji wepụta ya na fiverr wee nweta saịtị m nke ihe karịrị mmadụ 70 tụbara, amaghị m etu ọ ga - esi mee ya naanị chọọ site na ịpị pinterest na fiverr ma ị ga - achọta ya.
Dịka m maara ugbu a ọ kacha mma maka SEO maka ebumnuche ndị a:
1. Ozugbo webusaiti anyị tụgidere o nwere 3 backlinks ọnụọgụ
2. Google mmasị na mmadụ mgbasa ozi mgbaàmà n'ihi ya, ọ gaghị akpado dị ka njikọ ugbo
3. Ugbu a njikọ pinterest bụ dofollow ọbụna oyiyi ahụ
4. Ọzọkwa akwado arịlịka ederede, ọ bụ zuru okè nke ịtụkwasị anyị Keywords
Egwu post! N'ezie na-enye aka. Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta 🙂
M na-agbalị na-amasị ya… ma m na-ahụ efu uru na ya. Anọ m na-atụdo ma na-arụkwa obere obere little ka mma, enweghị okporo ụzọ si na ya. Amaara m na o nwere ikike, mana anaghị m ahụ ya. Ihe ndị a niile “ihe ịga nke ọma” akụkọ dị mma, ma ruo mgbe m onwe m na-enweta a ịga nke ọma akụkọ na ọrụ, M ike na-anọ a otutu oge n'ebe.
Ọ bụkwa ihe na-ezighị ezi nke ndị ọrụ iji tụnyere ọrụ ndị a (Pinterest na Google dịka ọmụmaatụ) na Facebook. Facebook nwere ihe karịrị 820 nde ndị ọrụ. Nke ahụ bụ nzuzu. Amaara m mmadụ ole na ole na-eji Google maka okwu ahụ. O nwere oke uru dị ka Pinterest.
Ọ dị jụụ. Ọ na-atọ ụtọ ịtụtụpụta ụfọdụ ihe ma nye m ụfọdụ echiche. Mana Pinterest B NOTGHer onye na-agbanwe egwuregwu.
Ezi ọkwa n'agbanyeghị. Na-egosi na ị mara otu esi eji Pinterest.
Aga m abụ onye megidere iwu na nke a mgbe ọ bịara n'otu nkwupụta… na-atụnyere ya na Facebook. N'uche m, ọnụọgụ ndị ọrụ enweghị ihe metụtara mkpa ahịa anyị. Kama nke ahụ, ana m adọta ọtụtụ ndị ahịa na Pinterest karịa Facebook!
Jul 5, 2012 na 10:18 PM
austin enwere ezigbo ngwa mgbakwunye pinterst?